Libaney mpiasa matihaninana amin’ny fahasalamana, manameloka ny “Fitsaboana Fanovàna” ny LGBTQ+” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 17:13 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, 日本語, Français, Ελληνικά, English
Fanentanana nalefan'ny LebMASH. Loharano: Vohikala LebMASH . Mivaky hoe Toetra voajanahary ny fitiavana ny mitovy fananahana amin'ny tena
Ny 8 Novambra 2018; ny Fikambanana Libaney momba ny Fahasalamana Ara-pananahana (LebMASH), fikambanana iray misy an'ireo dokotera matihanina amin'ny ara-pahasalamana, dia nanomana hetsika iray hanombohana fanentanana hanoherana ny fitsaboana fanovàna, “ilay sarintsariny lazaina fa ara-tsiantifika hanovàna ny fironana ara-pananahana ananan'ny olona iray… amin'ny firotsahana amin'ny fitsaboana ara-tsaina na ara-panahy.” Ny fitsaboana fanovàna dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ireo dingana fantatra amin'ny hoe Ezaka Fanovàna ny Fironana Ara-Pananahana (SOCE: Sexual Orientation Conversion Efforts ).
Ny fanentanana, atao hoe HINAD, midika hoe “Tsy Aretina ny Fitiavana ny Mitovy Fananahana amin'ny Tena“, dia tohin'ireo tatitra marobe mi8laza fisian'olona mitovy fananahana niharanà endrika SOCE isankarazany, ary koa seminera nokarakaraina tamin'ny taona 2017 ka nandritra izay fotoana izay no nanoloran'ny dokotera iray mpitsabo taovam-pamaniana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fampiasana herinaratra.
Tamin'ny fanamafisana fa mampiasa an'ireo karazana fitsaboana ireo izy, notanisain'ilay dokotera mpitsabo taovam-pananahana ny filoha lefitra Amerikana, Mike Pence, ho toy ny mpandàla an'io fomba io, ary nanamafy izy fa ao Shina, ny “80% n'ireo olona nampiasàna an'io fomba io dia sitrana avokoa”. Tsara marihana fa tsy nisy fikarohana natolotra ho entina manamarina an'io fanamafisana farany io.
Taorian'io trangan-javatra io, nikambana tamin'ny HELEM ny LebMASH, vondrona Libaney mpisolovava ny LGBTQ+, ary nanomboka ny fanadihadiana mikasika ny fampiasana ny SOCE tao Libanona tamin'ny alalan'ny fanadihadiana an'ireo olona niharan'io karazana “fitsaboana” io. Ireo olona mangataka ny hanaovana SOCE dia ireo ray amandreny izay nitondra ny zanak'izy ireo “mba ho sitranina” ary ireo olona mahatsiaro henatra noho ny ataon'ny fiarahamonina.
Miatrika fankahalàna sy fiolonolonana ireo olona LGBT+ ao Libanona noho ny antony ara-kolontsaina, ara-pinoana ary ara-pitsarana. Fikarohana iray natao tamin'ny taona 2015 no nahita fa ny 72% tamin'ireo Libaney no mihevitra fa ny fitoviana fananahana dia fikorontanana ara-tsaina ary ny 79% dia manaiky ny hitondràna ireo mitovy fananahana hanaovana fitsaboana fanovàna. Mahazatra ny fidinan'ireo polisy any amin'ireo toerana misy mpifankatia mitovy fananahana.
Tsy midika akory izany fa tsy nanao ezaka ireo vondrona mpiaro ny zon'ireo LGBT tato anatin'ireo taona vitsivitsy lasa. Tamin'ny taona 2013, ny Fikambanan'ireo Libaney psikology sy ny Fikambanan'ireo Libaney Mpitsabo Saina dia nanambara fa ny fitiavana ny mitovy taovam-pananahana amin'ny tena dia tsy aretina velively ary tsy mila fitsaboana mihitsy. Nampangain'izy ireo ny fampiasana ny ‘fitsaboana fanovàna’.
Tamin'ny Janoary 2016, namoaka lahatsary iray mitondra ny lohateny hoe “Shou El Sabab” (Inona no antony?) ny LebMASH mamahavaha an'ireo hevitra diso mikasika ny fitiavana ny mitovy taovam-pananahana amin'ny tena.
Eo amin'ny lafiny araka ny lalàna, ny andininy faha-534 no anisany sakana lehibe indrindra ho an'ny zon'ny LGBTQ+. Ilay andalana, nisy hatramin'ny nitantanan'ny frantsay tao Libanona tamin'ny taona 1920 ary voasoratra ao anatin'ireo lalàna famaizana nandritra ny fanambaràna ny fahaleovantenn'i Libanona tamin'ny taona 1943, dia manasazy “izay firaisana ara-nofo rehetra mifanohitra amin'ny tokony ho izy” miaraka amin'ny fanasaziana an-tranomaizina herintaona.
Na tsy miresaka mazava an'ireo firaisan'ny mitovy fananahana aza izy io, manana fahefana miafina ireo tribonaly hanapaka hevitra ny tsy hihevitra ny firaisan'ny mitovy fananahana ho toy ny natoraly na tsia, izay matetika mitarika mankamin'ny fanibohana an-tranomaizina an'ireo olona LGBT.
Na izany aza, tao ireo tranga nahitàna fandikana tena mandroso tsikelikely kokoa.
Tamin'ny 2016, mpitsara iray no nandika tamin'ny fomba hafa ilay lalàna, tamin'ny filazana fa ny fitiavana ny mitovy fananahana dia tsy mandika velively ny natiora ary nitsara tsy nisy famonjàna.
Tamin'ny Jolay 2018, nisy fitomboana hatrany ny tsy fanasaziana ny fitiavana ny mitovy fananahana. Nanamafy didim-pitsarana notoherina ny fitsaràna mba tsy hanamelohana vondron'olona iray tia ny mitovy fananahana aminy sy ireo ‘transgenres’.
Na eo aza izany, araka ny zava-misy, navela ho an'ny fandikàna sy ny tsiambaratelon-dry zareo mpitsara ny lalàna, ary tsy mbola nesorina ny andininy faha 534. Io no fangatahana voalohany indrindra nataon'ireo vondrona mpiaro ny zon'ireo LGBTQ+ ao Libanona.
Tamin'ny taona 2018, im-betsaka voatafika ireo vondrona LGBTQ+. Na niatrika fanamby maro aza ny Beirut Pride 2017, mbola nahavita nitranga hatrany izy io. Ny taona 2018 anefa, nentin'ireo mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo mpikarakara mba ho atao fanadihadiana ary tohin'izay dia noterena hanafoana an'ireo fihetsiketsehana.
Hetsika iray ‘fifamotoanana malaky’ nokarakarain'ny Klioban'ny Miralenta sy ny Fananahana avy amin'ny Anjerimanontolo Amerikana ao Beyrouth no nofoanana ihany koa vao haingana tohin'ireo fandrahonana natao tamin'ilay klioba taorian'ny nanamelohan'ny mpitondra fivavahana teo aloha iray, Mohamad Rashid Qabani, azy.